DILOILO COCO SY NY TOMBOTSOA ENTINY | Fitandremana Ankadifotsy
DILOILO COCO SY NY TOMBOTSOA ENTINY
Hainao ve >
Efa tsy vaovao amintsika loatra ny fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ny diloilo coco.
Iza amintsika malagasy no tsy mahafantatra ny diloilo «coco». Raha ny eto Madagasikara tokoa dia ahitana betsaka azy manerana ny Nosy. Maro ny tombotsoa entiny izay hozaraina amintsika eto.
Firifiry amintsika vehivavy malagasy no tsy efa samy nanosotra diloilo coco tamin'ny volony. Ireo Ray aman-drenintsika tany aloha dia efa nahatakatra tsara ny soa entiny amin'izay fikarakarana ny volo izay. Manan-karena vitamina E sy K ary vy ity menaka ity ka mamelona tsara ny volo sady manome hadiry ary mampangirana tsara azy. Tena mety ho an'ny volo maina sy simba mihitsy ny diloilo coco. Miaro amin'ny fihintsanan'ny volo ihany koa ny fampiasana azy matetika. Raha tiana tsy hifotetaka be ny volo dia tsara kokoa raha tsy hosorana hatrany amin'ny fotom-bolo fa ny tahony ihany no asiana indray na indroa mitete.
Raha misy faritra may, tsy ilay may misy fery akory, dia azo hosorana menaka coco isan'andro fa ho hitanao fa hihasitrana sady tsy hamela faritra izany.
Ankoatra izay, rehefa ririnina tahaka izao ny andro, dia maro ny molotra vakivaky. Ialana amin'izay dia hosorana diloilo kely ny molotra dia ho hitanao fa ho lasa mandina tsara.
Araka izany, mampamandimadina ny diloilo coco ka mety tsara hatao fanosotra amin'ny hoditra satria sady mamelona ny hoditra izy no manajanona izay mety mamaivay, miaro amin'ny fahateran'ny hoditra haingana ihany koa ity menaka ity. Ho antsika vizana na reraka nanao fanatanjahan-tena dia mety amin'ny fanorana tsara ny diloilo coco, araka izany. Azo atao solona «crème solaire» tsara ihany
koa izy ity ka miaro amin'ny hafanana entin'ny masoandro amin'ny tarehy.
Mitondra zavatsoa ho an'ny zaza ihany koa ny fampiasana azy. Iza no tsy mahalala ilay fitenenana hoe «Samy nosoran-dreniny menaka». Eny tokoa ny fanosorana diloilo coco ny zaza dia mampalefaka sady mampamadimandina ny hodiny. Indrindra fa ny vodin'ny zaza izay matetika sasana sy fafana rehefa avy manao maloto ka lasa vakivaky na manify ery ny hoditry ny zaza. Hosorana menaka kely indray mitete dia ampy, rehefa izy avy sasana iny, manala ny fanaintanana amin'ilay faritra.
Ho antsika lehilahy kosa indray, raha tsy mety amintsika ny mividy ireny «crème rasage » fanalana volombava ireny sady lafo no indraindray tsy mety amin'ny hoditrantsika dia mampiasà diloilo coco fa ho hitana fa halefaka tsara ny tarehinao.
Gazety Fafana Aogositra 2016